एउटा स्वप्निल पाठशाला
कला अनुरागी शनिवार, चैत ५, २०७३ 1617 पटक पढिएको
फागुनको पहिलो साता । नयाँ दिल्लीमा रोज्जा मौसम छ । गर्मीको ग्राफ उकालो चढ्न पाएको छैन, जाडोसँग सताउने सामथ्र्य सकिँदैछ । मोहक मौसमको आनन्दमा खुलेको मन लिएर पुगेका छौं मन्डी हाउसस्थित राष्ट्रिय नाट्य विद्यालय अर्थात् एनएसडी । गोधूलि साँझमा झिल्मिलाउँदै गरेको दिल्लीको अरू रौनक छोडेर एनएसडी गेटबाट भित्र पस्दै गर्दा झट्ट सम्झन्छु रंगकर्मी सुनील पोखरेलले उल्लेख गरेको प्रसंग, ‘सन् २००४ तिरको कुरा हो । नर्वेबाट फर्कंदै थिएँ । दिल्ली एअरपोर्टमा एकजना भारतीयसँग परिचय भयो । उनले मेरोबारे सोधे । मैले उनलाई थिएटर गरिरहेको र एनएसडी पढेको बताएँ । उनले त एक्कासि मेरो गोडा छोए । थिएटरप्रति निकै रुचि राख्ने तिनी एनएसडी प्रवेश परीक्षामा कत्ति गर्दा पनि पास हुन सकेका रहेनछन् ।'
त्यो प्रसंगले रंगकर्मीहरूको स्वप्निल पाठशाला एनएसडीको भव्य चित्र कोरिएको थियो मनमा । चित्रमा उत्रिएको कल्पनालाई वास्तविकतामा दाँज्ने अवसर पनि आँखैअघि फैलियो । साथमा थियो, मण्डला थिएटरका कला निर्देशक राजन खतिवडा नेतृत्वको रंगकर्मी समूह । फेब्रुअरीको पहिलो दिनबाटै सुरु भएको ‘१९औं भारत रंग महोत्सव'को कलात्मक ब्यानर छन् जताततै । उपहारादि सामग्री किन्न ‘थिएटर बजार' चलिरहेको छ, भोकले भरंग बनाए ‘फुडकोर्ट' त्यतै छ । पुस्तकादि चाहिए किताब बिक्री कक्ष खुल्लै छ । वरिपरिका भित्तामा अघिल्ला महोत्सवमा मञ्चित नाटकहरूको तस्बिर-कोलाज टाँगिएका छन् । भवन र मञ्चहरूबीचको ‘करिडोर' तथा ‘लवी'का संरचना हेर्दा लाग्छ, कुनै आर्ट ग्यालरीमा पसिरहेछु । तिनका भित्तामा नाटकका तस्बिरकथा छन् । एनएसडी ‘पास आउट' प्रसिद्ध रंगकर्मीका तस्बिर छन् ।
गेटैअघिको खुला चौरबीच एनएसडी महोत्सव बोर्ड चम्किएको छ, पृष्ठभागमा कुँदिएका छन् नाट्यमुद्राका अनुहारमूर्ति जीवन्त लाग्छन् । हाँगाहरूमा लालटिन झुन्ड्याइएका चौर छेउछाउका रूख परबाट हेर्दा दर्जनौं जून फलिरहेका बोटजस्ता देखिन्छन् । प्रकाशले नुहाइरहेको झम्के साँझमा एनएसडीको माहोल सुन्दर कविता पढ्नुजत्तिकै आनन्ददायी र रोमाञ्चक लाग्छ । मस्तिष्कमा झञ्झावात चलेजस्तो हुन्छ, रोम-रोम रोमाञ्चित हुन्छ । मनमा कसोकसो कल्पना र सपनाको नागबेली चुल्ठो बाटिँदै जान्छ । एउटा अतृप्त प्यासले चरक्क पार्छ छाती । निस्कन्छ सुस्केरा, ‘हामीकहाँ पनि यस्तै कलात्मक माहोल भइदिए !'
‘त्यसको लागि स्थान खै ? ', चौरमा बसेर चिया पिउँदै गरेका राजन चिन्ता व्यक्त गर्छन्, ‘चिया पिउनकै लागि अन्यत्र धाउन नपर्ने फराकिलो ठाउँ भइदिए !' दयाहाङ राईको सोचाइ बोल्छ, ‘कलाप्रेमीहरू निर्धक्कले बसेर छलफल र अध्ययन गर्न सक्ने स्थान बनाउन सके !' कलात्मक लबीमा सरसर्ती आँखा डुलाएपछि सिर्जना सुब्बा भन्छिन्, ‘यत्तिमात्रै ठाउँ भइदिए पनि हुन्थ्यो !' सरिता गिरी तस्बिर-कोलाज नियाल्दै बोल्छिन्, ‘सोचलाई साधनको अभावले पनि त साँघुर्‍याउँदो रहेछ !'
अर्को साँझ चौरमा बसेर चिया पिउने समूहमा दयाहाङ राईका साथमा छन् नेपाल पत्रकार महासंघ, भारत शाखाका सचिव ऋषिराम अधिकारी । रंगप्रेमी अधिकारी नेपाली रंगक्षेत्रको हालचाल बुझ्न आतुर छन् ।
यता, दयाको अनुहार हेर्दा देखिन्छ- दिनभरि एनएसडीका नाटक र नृत्य-प्रहसनादिको कलात्मक माहोलले दिएको मुग्धता बेलुका हुँदै जाँदा तिक्ततामा फेरिँदैछ । मानौं, दिनभरि साथीसंगीसँग हाटमा रमाएको तन्नेरी बेलुका आफ्नो लथालिंग घरको सम्झनाले बिरक्तिइरहेछ । दयाहाङ भन्छन्, ‘एक दिन राष्ट्रिय नाचघर अघिबाट हिँड्दै थिएँ । गेटैमा पेन्टी र ब्रा झुन्ड्याएका थिए बेच्नका लागि । एकैछिन हेरिरहेँ, विरक्त चल्यो ।'
अत्याधुनिक ढाँचाकाँचामा बनेको छ काठमाडौंको केन्द्र जमलमा राष्ट्रिय नाचघर । तर, तिनका हलभाडा रंगकर्मीले तिर्नसक्ने हैसियतको छैन । नाटक गर्ने ठाउँ खोज्दाखोज्दै आफ्नै नाटकघरको सपना पन्पिन्छ उनीहरूमा । कमिलाले घर बनाउन माटो ओसारेजत्तिकै मेहनतले बनेका छन् केही निजी नाटकघर । तिनमा पसिना र मेहनतको जग त छ तर जग्गा छैन । जग्गा आफ्नो नहुन्जेल जग बलियो नहुँदो रहेछ । सोही मारमा परेर राजधानीका ढले आरोहण गुरुकुल र थिएटर भिलेजका घर । अरू चार थिएटर घर धरमराउँदै भए पनि धानिँदैछन् । अहिले राजधानीबाहिर पनि बन्दैछन् रंगघरहरू ।
तर, व्यक्ति र समूहस्तरका यी प्रयत्नबाट बेखबर छ राज्य । जसलाई रंगकर्मको रंगले कतै छोएको देखिँदैन । छन त, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठान छ । तर, आफ्नै करुण संगीत र दयनीय नाटक काफी छ उसका लागि । दयाहाङ दया देखाउँदै भन्छन्, ‘अब यहाँ एउटा महोत्सवका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट दिएको छ । हाम्रो प्रतिष्ठानमा त उता सप्पै बजेट पो चार करोडको हुँदा रहेछ । कसरी पुर्‍याऊन् त ! त्यसमा पनि, सक्रिय रंगकर्मी प्रतिष्ठान पुग्दैनन् । जो पुग्छन्, उनीहरू ठान्छन्-मैले कम दुःखले आज्र्याको पद हो र नाटकको चिन्ता गरिबस्नु ? ' ऋषिरामतिर हेरेर दया अलिनो हाँसो हाँस्छन्- यस्तै छ साथी हाम्रो हाल !
एनएसडी पढ्ने अवसर थोरै नेपालीले पाएका छन् । पोखराका तीर्थ शेरचन एनएसडी पढ्ने पहिलो नेपाली हुन् । उनैबाट जानकारी पाएपछि निकै संघर्ष गरेर पुगेका सुनील पोखरेल आफ्नो ब्याचको ‘बेस्ट अलराउन्डर' बने । रंगकर्मी सोमनाथ खनाल भन्दै थिए, ‘सुनील सरको नाम यहाँ निकै सम्मानका साथ लिइन्छ ।' सिनेमा र रंगकर्ममा उत्तिकै सक्रिय अनुप बराल त्यसपछि एनएसडी पुगेका हुन् । रंगकर्मी विमल सुवेदी पछिल्ला ‘एनएसडी पासआउट' नेपाली विद्यार्थी हुन् ।
नेपाली रंगमञ्चमा ‘एनएसडी पासआउट'को छुट्टै प्रभाव छ । पोखरेललाई नेपाली रंगमञ्चको पछिल्लो पुनर्जागरणको जस जान्छ । बरालले गरेको प्रयोग र मोलेको खतरा दुवैले नेपाली रंगमञ्चलाई दिएको गति उल्लेख्य छ । पछिल्लो पुस्ताका विमल सुवेदी रंगमञ्चमा पृथक रंग दिँदैछन् । तिनैजनाको प्रभाव ग्रहण गर्ने र त्यसबाट उत्प्रेरित भएर मौलिक बाटो खोज्ने रंगकर्मीको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
दयाहाङ राई भन्छन्, ‘एक दिन राष्ट्रिय नाचघर अघिबाट हिँड्दै थिएँ । गेटैमा पेन्टी र ब्रा झुन्ड्याएका थिए बेच्नका लागि । एकैछिन हेरिरहेँ, विरक्त चल्यो।'
राजन खतिवडाले थिएटर सपना सुनील पोखरेलको ‘स्कुल'बाट हुर्काएका हुन् । त्यसपछि मण्डला थिएटरसम्मको उनको यात्राचाहिँ मौलिक पहिचानको खोजी । त्यसकै एउटा कोशेढुंगास्वरूप उनले निर्देशन गरेको नाटक हो सत्यमोहन जोशीलिखित ‘सुनकेशरी' । कथ्यशैलीको नवीनता र मौलिक कलात्मक भाषाको कसीमा उत्रिएर महोत्सवमा छनोट भएको नाटक महोत्सवको १७औं साँझ मञ्चन हुँदैछ । कर्णाली क्षेत्रमा प्रचलित लोककथा खिप्दै खसभाषा मिसाएर लेखिएको नाटकको कथन नेपालीभाषीलाई नै राम्ररी बुझ्न कठिन छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकको प्रतिक्रिया सुनिन्छ, ‘गज्जबले बुझियो ।'
एनएसडीमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत रोहित जैनलाई दोहोर्‍याएर सोध्छु, ‘साँच्चै सबै कथा बुझ्यौ ? ' ‘मज्जाले बुझेँ । चरित्रहरूले यसरी कथालाई उतारेका छन् कि मलाई शब्दमा जानै परेन', उनले भने । राजनको निर्देशकीय सामथ्र्य र मौलिकतालाई त्यहाँका दर्शकले बढी बोध गरे हुनन् ।
नाटक मञ्चन भएको ‘सुनकेशरी' मञ्चन भयो । भोलिपल्ट बिहान ‘मिट त डाइरेक्टर' सेसन छ । अघिल्लो दिन मञ्चित ६ नाटकका निर्देशक हाजिर छन् मञ्चमा । मञ्चमै उपस्थित छन् नाटक समीक्षकहरू पनि ।
६ मध्ये एकमात्रै ‘विदेशी' नाटक ‘सुनकेशरी' । सेसनका सहभागीमध्ये उनी अतिथिका रूपमा आदर पाउँछन् । फ्लोरमा घच्चीमच्ची छ उत्साहित दर्शकको । नाटकका अनेक आयाममाथि प्रश्न-उत्तर चल्छ ।
नेपाली नाटकमाथि प्रश्न कम छ । तर, एउटा प्रश्नले मज्जैले झस्काइदिन्छ । सोधिन्छ, ‘नाटकमा महिलाको चरित्र निकै शक्तिशाली छ । कत्तिको गाह्रो छ नाटक खेल्ने महिला पाउनु ? '
रंगमञ्चमा लाग्ने सपनाको मूल्य अनेक तरहले जीवनभर तिरिरहनुपर्ने बाध्यतामा अझै छन् महिला रंगकर्मी । नाटकमा देखिने ‘बोल्ड' महिला चरित्र पितृसत्तात्मक सामाजिक-राजनीतिक संरचनाको काँडा कुल्चँदै दौडिएका रक्ताम्य पाइला नै होइनन् त ? तर, आधुनिक समयको छायामा बसेर बेवास्ता गरिरहेको पक्ष हो यो । दिल्लीजस्तो अत्याधुनिकता भोग गरिरहेको समाजको बीचबाट यस्तो प्रश्न उठ्दा संवेदना र गर्वको घोल बन्दो रहेछ । राजनले उत्तर दिए, ‘गाह्रो त छ । तर, युवापुस्तामा रंगकर्मप्रति यति धेरै लगाव छ कि त्यस्तो गाह्रो पनि छैन ।'
फणिश्वरनाथ रेणुलिखित उपन्यास ‘मैला आँचल'लाई नाटकीकरण गरेर निर्देशन गरेका पुराना पुस्ताका सुरेन्द्र शर्मा धेरै प्रश्न झेल्नेमा पर्छन् । उपन्यासलाई नाटकमा रूपान्तरण गर्ने तकनिकीदेखि लिएर पुरानो समय-सन्दर्भलाई नाटक हुने समयमा कसरी कलात्मक रूपमा जोड्ने भन्नेसम्मका विमर्शले ठाउँ पाउँछन् ।
नयाँ पुस्ताकी निर्देशक विदिशा पुरोहितको बलिया उत्तरले विमर्शको माहोल उत्साहित बन्छ । तेस्रोलिंगी-समलिंगी मुद्दामा हिमांशु जोशीले लेखेको नाटक निर्देशक गरेकी उनीसँग आफ्ना कामको ‘कन्भिन्सिङ' जवाफ छ । उनी मञ्च संरचना, चरित्रदेखि नाटकमा प्रयोग गरिएका ‘प्रप्स'मार्फत आफूले प्रवाह गर्न खोजेको विचार र त्यसको कलात्मक मूल्यप्रति स्पष्ट देखिन्छिन् । सेसनपछि दयाहाङ भन्छन्, ‘हामी पनि काम गर्दा यत्तिकै स्पष्ट भएर काम गर्न आवश्यक छ ।'
‘नेपाली रंगकर्मी कत्तिको स्पष्ट भएर काम गरिरहेका छन् त ? '
‘छन् कि छैनन्, उत्तर खोज्न उत्प्रेरित गर्दो रहेछ यस्तो कार्यक्रमले !', विकाश जोशी जोशिन्छन् ।
‘हरेक नाटकमाथि यस्तै अन्तरक्रिया गर्ने हो भने त्यो खोजको गति बढ्थ्यो कि ? ', प्रस्ताव गर्छु ।
‘यो त तत्कालै सुरु गर्न सकिन्छ', दयाहाङ उत्साहित हुन्छन् ।
२१ दिने महोत्सवको १८औं साँझ नै हामी दिल्ली छोड्दै थियौं । दिउँसो एनएसडी गेटबाट निस्कँदा अघिल्लो साँझ चौरमा बसेर चिया पिउँदै राजनले भनेको सम्झिएँ, ‘मौलिक कथा र यसलाई भन्ने मौलिक तरिका खोज्नुपर्छ भन्ने लागिरहन्छ । त्यसका लागि यात्रा आवश्यक छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो वातावरण कहाँ छ र ? '
‘सुनकेशरी' पनि जोशीले ०२८ सालमा कर्णालीको सिञ्जा उपत्यका घुम्दा लेखेका थिए । ‘त्यसैले यसको कथा र वाचनशैली दुवैमा मौलिकता छ । सायद, महोत्सवमा छनोट हुनुको कारण पनि यही हो', निर्देशकका रूपमा पहिलोपटक एनएसडी महोत्सव पुगेका उनले भने । महोत्सवीय रंगीन साँझको एक टुक्रा समयमा उनले आफ्नो मुलायम सपना पेन्टिङ गरेजसरी लयबद्ध सुनाएका थिए, ‘थिएटरको व्यवस्थापन र प्राविधिक कामको उल्झन नहोस् । आर्थिक चिन्ता नहोस् । खोजको भोकमा वेगिँदै हिँड्न पाइयोस् । समाजको चेप्चेपमा च्यापिएका अनमोल कथा खोजी ल्याउनुहुन्थ्यो । मानिसको जीवनमा घोलिएका शैली सिकी आउनुहुन्थ्यो ।'
‘प्रतिष्ठानजस्ता निकायले चाहने हो भने सजिलै बनाउन सक्छन् नि यति वातावरण त', गोकर्ण चौथो अंगबाट बोल्दै थिए । तर, प्रतिष्ठानजस्ता निकायको हालत देखेभोगेका हाम्रो छाया दिल्लीको दर्पणमा निकै मायालाग्दो देखिएको थियो । राजनको हृदयबाट तप्किरहेको सपनाका थोपा कर्कलाको पातमा जस्तै ढलपलाइरहेका थिए, तर ती चम्किला जरुर थिए ।
प्रधानमन्त्री आज भारत जाँदै 747
नेपाल-भारत वार्ता : पञ्चेश्वर असफल 4138
पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा गोविन्द आचार्य विजयी 9318
सांसद नै ठगिन्छन् ट्याक्सी चालकबाट अरूको हालत के होला? 45115
संशोधनमा दुई तिहाइका लागि ४८ मत पुगेन 4650
फौजदारी संहितामा फड्को 678
नेपाल-भारत सम्बन्धका अहम् सवाल 429
टुलु-टुलु, निष्ठुरीको स्वतन्त्र प्रेस ! 1346
बाढी पीडितको सहयोगका लागि प्रचण्डले दिए देउवालाई चेक 919
सर्पको टोकइबाट एकको मृत्यु 275
हातेमालो सहकारीद्वारा बाढीपीडितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 414
बाढीले निजीक्षेत्रमा अर्बौ क्षति 317
अध्यागमनको फन्दामा नक्कली खेलाडी 2503
'गोडा गुम्यो, गैंडा नगुमोस्' 1505
'आर्थिक समृद्धिका लागि आइटी उद्योग बनाउन सरकार तयार' 1572